Ari muJerusarema kuMutambo Wematebhenekeri | Upenyu hwaJesu
JESU ANODZIDZISA MUTEMBERI
Jesu ava kuzivikanwa nevakawanda mumakore avapo kubvira paakabhabhatidzwa. Zviuru zvevaJudha zvakamuona achiita zvishamiso, uye nyika yacho yose yazara nemashoko pamusoro pemabasa ake. Iye zvino, paMutambo Wematebhenekeri (kana kuti Wematumba) muJerusarema, vakawanda vari kumutsvaga.
Vanhu vari kutaura zvakasiyana-siyana nezvaJesu. Vamwe vari kuti: “Munhu akanaka.” Vamwewo ndivo vari kuti: “Haasi, asi anotsausa boka revanhu.” (Johani 7:12) Kazevezeve aka kari kunyanya kuitwa pamazuva okutanga emutambo wacho. Asi hapana akashinga kutaura zvakanaka nezvaJesu paruzhinji, nokuti vanhu vose vari kutya vakuru vechiJudha.
Mutambo wava pakati, Jesu anoti pfacha patemberi. Vanhu vakawanda vanoshamiswa nokudzidzisa kwake. Haana kumbopinda zvikoro zvavanarabhi, saka vaJudha vanobvunzana kuti: “Munhu uyu anoziva sei [Magwaro], iye asina kudzidza kuzvikoro?”—Johani 7:15.
Jesu anotsanangura kuti: “Zvandinodzidzisa hazvisi zvangu, asi ndezvaiye akandituma. Kana munhu achida kuita zvinodiwa naIye, achaziva pamusoro pokudzidzisa kwacho kana kuchibva kuna Mwari kana kuti ini ndichitaura zvangu ndoga.” (Johani 7:16, 17) Zvinodzidziswa naJesu zvinoenderana neMutemo waMwari, saka zviri pachena kuti ari kutsvaka kuti Mwari akudzwe, kwete iye.
Jesu anozoti: “Mosesi haana kukupai Mutemo here? Asi hapana kana nomumwe wenyu anoteerera Mutemo wacho. Muri kutsvakirei kundiuraya?” Vamwe havasi kuziva kuti pane vari kuda kumuuraya. Zvimwe vamwe vakadaro vashanyi vabva kunze kweguta. Vanoshaya kuti mudzidzisi akadaro angada kuurayiwa naani. Saka mashoko ake anoita kuti vafunge kuti pfungwa dzake hadzichatora zvakanaka. Vanoti: “Une dhimoni. Ndiani ari kutsvaka kukuuraya?”—Johani 7:19, 20.
Chiripo ndechokuti gore rakapera paseri, vakuru vechiJudha vaida kuuraya Jesu paakaporesa mumwe murume paSabata. Iye zvino Jesu anovaita kuti vafunge achishandisa Mutemo wavanoziva, ofumura kusafunga kwavo. Anovayeuchidza kuti muMutemo munoti mwana mukomana anodzingiswa kana kuti kuchecheudzwa pazuva rechisere, kunyange kana riri reSabata. Anozovabvunza kuti: “Kana munhu achidzingiswa pasabata kuti mutemo waMosesi urege kuputswa, nei imi muri kunditsamwira kwazvo nokuti ndakaita kuti munhu anyatsova noutano hwakanaka pasabata? Regai kutonga nezvinooneka kunze, asi tongai nokutonga kwakarurama.”—Johani 7:23, 24.
Vagari vomuJerusarema, avo vari kuziva zviri kuitika vanoti nezvevatungamiriri vacho: “Uyu haasi iye munhu wavari kutsvaka kuuraya here? Asi, onai! ari kutaura pachena, uye hapana chavari kutaura kwaari.” Zvinovanetsa vachifunga kuti zvimwe vatungamiriri vacho vava kubvuma kuti ndiye Kristu. Ko zvino sei vanhu vacho vasingatendi kuti Jesu ndiye Kristu? “Isu tinoziva kunobva munhu uyu; asi panouya Kristu, hapana anofanira kuziva kwaanobva,” vanodaro.—Johani 7:25-27.
Jesu anobva avapindura ipapo ipapo mutemberi imomo achiti: “Munondiziva ini uye munoziva kwandinobva. Uyewo, handina kuzviuyira pachangu, asi iye akandituma aripo zvechokwadi, uye hamumuzivi. Ini ndinomuziva, nokuti ndiri mumiririri akabva kwaari, uye Iye akandituma.” (Johani 7:28, 29) Vanzwa mashoko iwayo akajeka vanoedza kubata Jesu kuti vamukande mujeri kana kuti vamuuraye. Asi vanokundikana nokuti nguva yaJesu yokuti afe haisati yakwana.
Asi hazvishamisi kuti vakawanda vanotenda muna Jesu. Akafamba pamusoro pemvura, akanyaradza mhepo, akaita chishamiso chokuti zviuru zvevanhu zvikwane zvingwa nehove zvishomanana, akaporesa vanorwara, akaita kuti vakaremara vafambe, akasvinudza maziso emapofu, akarapa vane maperembudzi, akatomutsa kunyange vakafa. Regai vazobvunza kuti: “Kristu paanosvika, angazoita zviratidzo zvinopfuura zvaitwa nomunhu uyu here?”—Johani 7:31.
VaFarisi pavanonzwa vanhu vachitaura izvozvo, ivo nevapristi vakuru vanotuma vanhu kunosunga Jesu.
Jesu paanosvika pamutambo, vanhu vari kutii nezvake?
Jesu anotsanangura sei kuti vanhu vaone kuti haasi kutyora Mutemo waMwari?
Nei vakawanda vachitenda muna Jesu?